Guuleed, Faarax iyo XAASASKA Xasan oo diiday xilal ka qaadistii Gen Goobe, Saacid iyo Indha-qarshe, Sabab? |
Guuleed, Faarax iyo XAASASKA Xasan oo diiday xilal ka qaadistii Gen Goobe, Saacid iyo Indha-qarshe, Sabab?
Muqdisho (SomaliMedia Online) – Iscasilaadii Wasiirka Amniga Cabdi Kariim Xuseen Guuleed kadib waxaa soo baxday in madaxda Dawladda sida Madaxweynaha, Ra’isuul Wasaaraha iyo Gudoomiyaha Baarlamaanka isku raaceen in dhammaan Madaxda Laamaha Amniga Dalka is casilaan hadii ay diidaana xilalka laga qaado.
Masuuliyiintaas loo soo jeediyey inay is casilaan waxaa kamid ah Taliyaha Nabadsugida Qaranka General Bashiir Goobe, Taliyaha ciidamada Booliiska Soomaaliya General Saacid, Taliyaha Ciidamada Xooga Dalka General Indhaqarshe iyo Taliyaha Saadka iyo Logistikada Xooga Dalka Colonel Cabdullahi Macallin Nuur, Xilalkaan muhiimka ahna loo magacaabo shaqsiyaad daacad ah, aqoonna u leh meesha loo magacaabayo kana soo bixi kara masuuliyadda qaran ee lagu aamino.
General Bashiir Goobe ayaa la sheegay in bil kasta laga siin jiray lacag dhan Hal Milyan oo Doolar lacagta uu Turkigu siiyo Dawladda Soomaaliya oo ah 4.5 Milyan Doolar, lacagtaan oo ah mid ka dheeri ah Budget-ka Dawladda iyo lacagaha UAE iyo Qadar bixiyaan.
Lacagta ah Halka Milyan Doolar oo Turkiga ka timaada ayuu General Bashiir Goobe u qeybiyaa sida soo socota:-
• Wasiirka Amniga ee is casilay Cabdikariin bishii wuxuu lahaa 200,000$
• Labada Xaas ee Madaxweynaha (Sahro Cumar iyo Qamar Cali) Bishii waxay lahaayeen 200,000$
• Wasiirka Dastuurka Faarax Cabdulkadir bishii wuxuu qaataa 100,000$
• Lacag dhan 180,000$ General Bashiir wuxuu sheegaa inuu ku bixiyo qeyb kamid ah mushaarka ciidanka Nabadsugida.
• General Bashiir Goobe Wuxuu qaataa inta kale ee soo harta.
Wasiirka is casilay Cabdi Kariim Xuseen oo doonaya in lacagtu usii socoto ayaa la sheegayaa inuu Madaxweynaha ugu tagay in aan General Bashiir Goobe xilka laga qaadin, Sidoo kale Wasiirka Dastuurka Faarax Cabdulkadir ayaa iska diidey in Xilka laga qaado General Bashiir Goobe oo uu dhaqaalo dhan 100 kun doolar ka helo bishii, sidoo kalana General Bashir uu sida Faarax sheegto inuu yahay Beesha 5-aad.
Faarax Cabdulkadir iyo Bashir Gobe ayaa qabiil ahaan kasoo jeeda Beelaha Reer Aw-Xasan iyo Duduble oo Hawiye ah. Sidoo kale Labada Xaas oo Madaxweynaha oo midiiba qaadato bishii Lacag dhan 100,000$ ayaa madaxweynaha culeys badan ku saaray in General Bashiir Goobe loo daayo xilkiisa.
Sidoo kale labada xaas ee madaxweynaha (Sahro Cumar iyo Qamar Ali) ayaa hor istaagay in xilka laga qaado Taliyaha saadka iyo Sahayda ciidamada Colonel Cadullahi Macalin Nuur oo ah wiil dhalinyaro ah oo ka yimid qurbaha xiligii uu madaxweynaha ahaa Sheikh Shariif, iyada oo xiligaa loo magacaabay Taliyaha Saadka iyo Logistikada ciidamada Xooga Dalka. Sidoo kale Sheikh Shariif waxa uu siiyey darajada Colonel isaga oo aan ebid soo marin ciidanimo. Waa muhiim in saadka iyo Logistikada Ciidamada Xooga Dalka in Maamulkooda loo dhiibo saraakiil aqoon u leh, taas oo qeyb ka noqon karta dib udhiska ciidamada Xooga Dalka,
QM ayaa warbixin ay horey usoo saartay ku sheegtay in Colonel Cabbdullahi Macallin Nuur uu hubkii iyo Tuutihii ciidanka xooga uu iibsaday, suuqana lagu arko si joogto ah, iyadoo sheegtay in qeybo badan oo ka mid ah hubkii dawladda u yimid iyo Tuutihii Milateriga Xooga uu u gacan galay Maliishiyada kooxda Nabadiidka ah ee Alshabaab iyo ganacsatada suuqyada hubka.
Colonel Cabdullahi Macallin Nuur ayaa bishiiba lacag aad u badan siiya labada marwo ee Madaxweyne Xasan Sheekh, labadaan marwo ayaa lacagahaan u isticmaala xafladaha lagu taageerayo madaxweynaha, booqashooyinka xarumaha barakacayaasha, Naafada ciidanka Xooga, Isbitaalada Muqdisho oo ay raashimo geeyaan xiliyada ay booqdaan, xiliyadaa oo TV-ga qaranka SNTV hore usii wataan.
Labada Marwo ee madaxweynaha (Sahro Cumar iyo Qamar Ali) ayaa sheegay inaysan aqbali karin in Xilalka laga qaado inta Xasan Sheekh madaxweynaha yahay Masuuliyiinta bixiya dhaqaalaha ku baxa kulamada iyo booqashooyinka meelaha bulshada muhiimka u ah oo lagu dhisayo siyaasadda Madaxweynaha. Masuuliyiintaan ayaa kala ah General Bashiir Goobe, Taliyaha Saadka Colonel Cabdullahi Macalin Nuur iyo kuwo kale oo badan.
Arimaha noocaan ah iyo musuqmaasuqa xadka ka baxay ayaa noqday kuwo joogto ka ah dalka, Madaxda Qaranka ayaa isku hareeraya shaqsiyaad ku qabiil ah iyada oo ay meesha kasii baxayso dantii guud ee dalka, madaxduna inta badan ilaaliyaan dano gaar ah oo ay leeyihiin shaqsiyaad iyaga ku xiran ama usoo qaraaba, taasoo ka hor imaanaysa dhaartii ay dhaarteen xiligii la magacaabay oo aheyd inay danta guud ee Dalka iyo Dadka Soomaaliyeed ilaalinayaan.
Qeybta daba-galka ee SomaliMedia
acquire zoloft, acquire Zoloft. Muqdisho – Soomaaliya